कत्तै रेडियो सहारामा त कत्तै अनलाईन मार्फत कक्षा ,अनलाईनमा कक्षा लिन नपाउनेले परीक्षा दिन नपाउने ? – Nepalpostkhabar
कत्तै रेडियो सहारामा त कत्तै अनलाईन मार्फत कक्षा ,अनलाईनमा कक्षा लिन नपाउनेले परीक्षा दिन नपाउने ?
Hemant KC । २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०७:१३ मा प्रकाशित
जाजरकोट , कोरोना भाईरसका कारण रोकिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाबाट परीक्षार्थीमा पर्न गएको समस्य हल गर्न भेरी नगरपालिकाले रेडियोबाट कक्षा सञ्चालन गरेको छ । परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई मध्य नजर गदै भेरी नगरपालिकाले रेडियो मार्फत कक्षा सञ्चालन गरेको छ । नगरभित्रका परीक्षामा सहभागी हुँने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी कक्षा सञ्चालन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।
सामुदायिक रेडियो खलंगाबाट प्रत्येक दिन सवै वैशाख १३ गतेबाट प्रशारण भईरहेको अधिकृत घर्तीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रेडियोलाई मासिक रु ४२ हजार उपलव्ध गराएको छ । गणीत , अंग्रेजी र विज्ञान विषयको मात्र पढाई हुँने रेडियोमा प्रति कक्षा रु ८ सयका दरले शिक्षकलाई रकम भुक्तानी गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरेको बताएको छ ।
अनलाईन कक्षामा सहभागी हुँन नसक्ने विद्यार्थीहरु परीक्षामा सहभागी हुँन नपाउने क्याम्पस प्रमुख चन्द्रबहादुर बुढाले फेसवुक मार्फत स्टाटस लेखेर जानकारी दिएका छन् । जाजरकोट जस्तो सवै ठाउँमा फोन नलाग्ने ठाउँमा क्याम्पसले सञ्चालन गरेको अनलाईनमा कक्षा नलिए परीक्षामा सहभागी हुँन नपाउने क्यम्पस प्रमुखको स्टाटसले सवैलाई दुखी बनाएको छ ।
यो समाचार तयार पादै गर्दा क्याम्पस प्रमुख बुढालाई सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन रहेको र क्याम्पसमा फोन गर्दा रिसिभ भएन ।